N'ogbe White Testosterone Steroid Testosterone Isocaproate Na-abawanye Ike na Nweta Muscle Manufacturer and Supplier |Taigui
White Testosterone Steroids Testosterone Isocaproate Na-abawanye Ike na Nweta Akwara
Aha ngwaahịa: Testosterone Isocaproate
Ọdịdị: ọcha crystalloid ntụ ntụ
Ụdị ngwaahịa: Steroid; Steroid na Hormone; API; testosterone
Ojiji: dị ka homonụ nwoke na homonụ anabolic.
Nchekwa: a na-atụ aro ka ịchekwaa ai okpomọkụ n'ime ụlọ n'okpuru 30 Celsius.
Debe ọgwụ ahụ pụọ na ìhè anyanwụ kpọmkwem, okpomọkụ na mmiri.
Ekwela ka ọgwụ ahụ na anya na iru ụmụaka
Ntụziaka Testosterone Isocaproate
100ml @ 200mg / ml Testosterone Isocaproate Ngwọta
20 grams ntụ ntụ
77 ml mmanụ
10 ml nke BB
Ị nwekwara ike iji guaiacol.Ọ ga-ebelata PIP
mana ị ga-ekewa pasentị BB na guaiacol
Ma belata BA na 2.5 ml
Ngwakọta steroid maka ahụike
► 3.30mg testosterone propionate + 60mg testosterone phenylpropionate + 60mg testosterone isocaproate + 100mg testosterone kaproate.
Testosterone Isocaproate Ọrụ
1. A na-eji Testosterone Isocaproate eme ihe iji meziwanye adịghị ike testosterone dị ka hypogonadism na mmekọahụ rụrụ arụ na-enwechaghị mmetụta.
2. Testosterone Isocaproate ga-enyere aka n'ịbawanye ibu ahụ ma nyekwa aka n'inwe ike.Ọ na-enyekwa aka n'ịlafu abụba n'ime ahụ ma na-enye mmụba nke libido, mkpụrụ ndụ ọbara uhie, ume na mgbake ngwa ngwa mgbe ọzụzụ siri ike gasịrị.
3. Dị ka ekwuru na mbụ, ọ na-esiri ike ịchọta ya n'ahịa n'ụdị ya dị ọcha ma raw ntụ ntụ dị n'ahịa n'ụdị Testosterone Cypionate na Testosterone Enanthate.
Testosterone Isocaproate usoro onunu ogwu
Enwere ike iwere Testosterone Isocaproate n'ụdị ntụtụ.
Maka ndị mbido, a na-atụ aro usoro onunu ogwu ka ọ bụrụ 250 mg / izu nke enwere ike were otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n'izu.
Maka ndị na-ewu ahụ ọkachamara ọkachamara nwere ike ịbawanye dose ahụ ruo 1000 mg kwa izu.
Testosterone Isocaproate eji
Adrenal cortex hormone, mgbochi mkpali, mgbochi ọgwụ na mgbochi nfụkasị, Pharmaceutical ihe onwunwe, Steroid hormone, Anabolin.Dị ka homonụ nwoke na homonụ anabolic.
Nhọrọ magburu onwe ya nke Testosterone, Isocaproate ester nwere ọkara ndụ n'etiti Testosterone Cypionate na Testosterone Enathate na 9 ụbọchị.
Ngwa Testosterone Isocaproate Bodybuilding
Ike Mass Testosterone Isocaproate bụ anabolic steroid, ọ nwere ikike dị ike iji kwalite njikọ protein nke muscle, ọtụtụ bodybuilders na ndị na-eme egwuregwu na-agbakwụnye ngwaahịa a na bulking ma ọ bụ ịkpụ okirikiri.
Inweta ike Testosterone Isocaproate ga-enyere aka n'ịbawanye ibu ahụ ma nyekwa aka na .Ọ na-enye aka n'ịlafu abụba n'ime ahụ ma na-enye mmụba nke libido, mkpụrụ ndụ ọbara uhie, ume na mgbake ngwa ngwa mgbe ọzụzụ siri ike gasịrị.
Ntachi obi na-abawanye Mgbe ị nwetachara ngwaahịa a, mkpụrụ ndụ ọbara uhie ga-abawanye nke pụtara na ọbara gị na-ebu oxygen karịa, ị ga-enwe ezigbo ntachi obi karịa ka ọ dị na mbụ.
Mbelata ibu Nke a bụ nghọtahie, ọtụtụ ndị poeple na-eche na ha ga-ebulata ibu mgbe ha ṅụchara ọgwụ steroid, nke ahụ adịghị mma, mmega ahụ na-emekọ ihe ọnụ dị mkpa.
Njikọ protein Testosterone Isocaproate bara uru n'ịbawanye njikọ nke protein n'ime ahụ, mbelata nke cortisol, na-abawanye ikike ịgbake karịsịa mgbe ọzụzụ siri ike, na-abawanye ike ma na-enyere onye ahụ aka inwetakwu uka.
Ịcha & Ịkụkọba Ọ na-arụkwa ọrụ nke ọma na ma ịcha ma na bulking cycles.Ma dị ka ọ na-metụtara ezinụlọ nke androgen ọ ga-enwe aromatizing Njirimara dị ka nke ọma.Ewezuga uru ndị a, o nwetala uru ndị ọzọ niile metụtara ya nke na-ejikọta ya na testosterone ọ bụla ọzọ.
Nke gara aga: Testosterone Fat Burning Enanthate CAS 315-37-7 Testosterone Steroid maka Mbelata ibu
Osote: Nrụpụta Muscle Injectable Testosterone Phenylpropionate TPP Steroid Powder CAS 1255-49-8
Mgbochi akwara nwere ike ịgbanye Steroid Mibolerone ...